कम्युनिस्ट भस्ट्राचारमा लिप्त, कांग्रेस थारो गाई : डा भट्टराई | NepalDut
कम्युनिस्ट भस्ट्राचारमा लिप्त, कांग्रेस थारो गाई : डा भट्टराई
पार्टी एकतासँगै समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको बोलीमा एकाएक शक्ति बढेको देखिएको छ ।
एकतापछि उनले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पूरानो घरको संज्ञा दिएका छन् । पार्टी एकता घोषणासभामा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले कांग्रेस र कम्युनिष्ट पूराना भएकाले जतिबेला पनि गल्र्यामगुर्लुम ढल्न सक्ने दाबी बताए ।
‘कम्युनिष्टले केही गर्न सक्दैनन् । कम्युनिष्ट भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसके त्यहाँ रहेका राम्रा साथीहरू आउनुस् हामी वैकल्पिक शक्ति बन्छौँ’, उनले थपे, कांग्रेस थारो गाई भइसक्यो घाँस हालेर दूध आउँदैन ।’
डा. भट्टराईले देशलाई कंकाल बनाउनेहरूले देशको विकास गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले आफूहरू सुशासन र पारदर्शितामा ‘कम्प्रमाईज’ नगरी देशको वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी गरे । ‘हिमाल पहाड तराई मधेसलाई हाम्रो पार्टीले जोड्छ’, उनले भने, ‘अब तराईमा आन्दोलन उठ्यो भने पहाडले पनि साथ दिन्छ । पहाडमा उठेको आन्दोलनलाई हिमाल र तराईले पनि सहयोग गर्छ ।’
एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईले अब देशमा अन्दोलनको आँधीबेहरी आउन सक्ने दाबी गरे । ‘अब एकल जातीय राज्य सत्ताले हाम्रा मागबारे सुनेन भने जतिसुकै बेला आन्दोलनको आँधीबेहरी अउनसक्छ । हाम्रो माग संविधान संशोधनको हो । एउटा पार्टी सरकारमा छ र अब के हुन्छ भन्ने साथीहरुलाई शंका छ । हामीले सहमति गरिसकेका छौं, जनताको अधिकार छोड्ने वाला छैनौं’, डा. भट्टराईले भने ।
उनले थपे, ‘हामी सडक, सदन र सरकारलाई आन्दोलनको रूपमा प्रयोग गर्छौ । तर सरकार भरपर्दो माध्यम भने होइन । यदि आवश्यक परेमा पार्टीमा निर्णय गरेर सरकारबारे जतिबेला पनि निर्णय लिनसक्छौँ ।’
एकल जातीय शासकहरूले मधेसी जनतालाई सधैं विभेद गरेको बताए । सीमाको रक्षकका रूपमा रहेको समुदाय राज्यसत्ताको विभेदमा परेको भन्दै त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘मधेसी जनता बर्दी विनाको सिपाही हुन् । तर उनीहरू सधैं राज्यसत्ताको विभेदमा परे
त्यसकाविरुद्ध लड्न अब एक हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अब मधेसको मात्रै होइन देशको रक्षा तपाईंहरूले गर्नुपर्छ । विचल्लित हुने अवस्था छैन ।